ILIFE H70, ताररहित भ्याकुम क्लीनर तपाइँ खोजिरहनु भएको थियो ग्याजेट समाचार
राफा रोड्रिगिज ब्यालेस्टेरोस | 24/08/2021 18:00 | सामान्य, घर
यो लाग्छ कि स्वायत्त वैक्यूम क्लीनर को "फैशन" एक कदम को एक बिट हो, वा छैन। तर साथसाथै उनीहरु फुल्छन् वैक्यूम क्लीनर को अन्य प्रकार कि शायद एक अधिक विश्वसनीय अनुभव प्रदान गर्दछ घरेलु सफाई को लागी। यो स्पष्ट छ कि धेरै लामो केबलहरु संग ती विशाल वैक्यूम क्लीनर इतिहास मा तल गएका छन्। र उनीहरु आफैलाई बजार मा स्थापित ताररहित भ्याकुम क्लीनर। आज हामी कुरा गर्छौं ILIFE H70.
भ्याकुम क्लीनर को अवधारणा जो एक सानो अंडाकार वाहन एक गहिरो सास लिन्छ भन्ने विश्वास गर्दैनन् को लागी घर को हरेक कुना। उल्लेख गर्न छैन शक्ति मा भिन्नता छ कि एक «conga» प्रकार भ्याकुम क्लीनर र एक हातमा भ्याकुम क्लीनर बीच पाउन सकिन्छ। धेरै को लागी, एक धेरै राम्रो उपकरण हाम्रो घर वा कार्यालय को हरेक भाग को एक धेरै गहिरो सफाई प्राप्त गर्न को लागी।
1 ILIFE H70 घरेलु सफाई को लागी समाधान
2 तपाइँको घर को लागी एक ILIFE H70
ILIFE H70 घरेलु सफाई को लागी समाधान
यदि तपाइँ एक रमाईलो गर्न चाहानुहुन्छ घरमा स्वच्छ वातावरण र तपाइँ यसको लागी सफाई को बारे मा चिन्ता गर्नुहुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण छ कि सकेसम्म धेरै मद्दत गर्न को लागी। अनन्त सम्भावनाहरु को बीच मा कि हामी आज बजार मा पाउन सक्छौं हामी को बारे मा कुरा गर्नेछौं ILIFE H70, एक भ्याकुम क्लीनर वायरलेस, बहुमुखी र पर्याप्त शक्ति भन्दा बढी संग। हामी प्रत्येक सतह र घर मा ठाउँ को लागी बिभिन्न टुक्राहरु र सामानहरु पाउँछौं।
उसलाई समात्नुहोस् ILIFE H70 भ्याकुम क्लीनर सबै भन्दा राम्रो मूल्य
माटो र सतह को प्रकार को उपयोग गर्न को लागी निर्भर गर्दछ दुई प्रकार को सक्शन शक्तिहरु। शक्ति सामान्य, जो एक सक्शन शक्ति संग कुनै पनि स्थिति को लागी हामीलाई सेवा गर्दछ १० केपीए। वा हामी मोड सक्रिय गर्न सक्छौं máximo जसको साथ हामी संग डबल भन्दा बढी को एक सक्शन शक्ति प्राप्त हुनेछ १२ केपीए, ताकि प्रतिरोध को लागी कुनै धूल को कण छैन।
तपाईलाई धन्यबाद शक्तिशाली brushless मोटर हामी सब भन्दा मौन तरीका मा सबै आवश्यक शक्ति प्राप्त गर्नेछौं। एक संग गणना गर्नुहोस् १.२ लिटर सम्मको क्षमता संग सजीलो खाली फोहोर कन्टेनर। र उसको सबै भागहरु हटाउन सकिने र धुने योग्य छन् डिशवॉशर मा पनि। यसको लम्बी आकार र ergonomic ह्यान्डल हामीलाई भुइँ भ्याकुम गर्न को लागी अनुमति दिन्छ, तर ऊर्ध्वाधर सतहहरु वा पनी छत।
तपाइँको घर को लागी एक ILIFE H70
एक महत्त्वपूर्ण विवरण खाता मा लिन को लागी जब हामी एक वैक्यूम क्लीनर प्राप्त गर्न चाहान्छौं स्वायत्तता हो कि यो हामीलाई प्रस्ताव गर्न सक्षम छ। ILIFE H70 छ 2500 mAh ब्याट्री संग सुसज्जित। एक शुल्क जसले हामीलाई तपाइँको अनुमति दिन्छ ४० मिनेट सम्म लगातार प्रयोग "सामान्य" मोडमा। र हामी के पाउन सक्छौं १००% मात्र ५ घण्टा भन्दा कम मा चार्ज भयो.
को सफाई को कुनै पनि प्रकार को लागी सामानएक, साथ साथै यसको टाउको को चिकनीपन को सामान संग कवर कि फर्नीचर वा पर्खाल हानिकारक छैन यो परम उपकरण बनाउनुहोस्। 180 डिग्री सम्म घुमाउनुहोस् र त्यो कुर्सी वा टेबल खुट्टा अशुद्ध छोडिएको छैन। यो पनि छ गरीब दृश्यता संग ती कोने को लागी एलईडी बत्ती संग प्रकाश.
यदि ILIFE H70 ताररहित हात द्वारा आयोजित वैक्यूम क्लीनर तपाइँ के खोज्दै हुनुहुन्थ्यो यो Aliexpress मा सबै भन्दा राम्रो मूल्य मा तपाइँको बनाउनुहोस् ढुवानी शुल्क बिना। तपाइँको घर को लागी यो लायक को रूप मा सफा हेर्न को लागी अब पर्खनुहोस्। र यो छ परम सफाई उपकरण आवश्यक भन्दा बढी खर्च नगरीकन।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » ILIFE H70, ताररहित भ्याकुम क्लीनर तपाइँ खोजिरहनु भएको थियो